Kwi-P & Q, siyaqonda ukuba umgangatho ophezulu, izixhobo eziyilelwe kakuhle kwiziphumo zeemveliso ezikumgangatho ophezulu, ukusetyenziswa kakuhle kwezinto eziphathekayo kunye nesixhobo sexesha elide Ukongeza, inkqubo yokugcinwa kwesixhobo se-P & Q siqinisekisa ukusebenza ngokukuko, ukuthembeka kunye nokuphila ixesha elide. Xa isiza ...
Izifundo zamatyala eP & Q
Isisombululo se-P & Q ● Yongeza ii-4pcs 3mm zokuqinisa iimbambo ngaphezulu (Hayi # 1,2), ii-6pcs 2.5x3mm zokuqinisa iimbambo kunye nee-2pcs zokuqinisa amakhonkco ebhotileni ...
I-LUG Light Factory i-LED yokukhanyisa i-aluminium
I-POWERLUG LED sisikhanyiso esingaphandle sombane we-LED, ekwanazo nezinto ezinikezelweyo, eziyilelwe ukukhanyisa izinto ezahlukeneyo zokwakha kunye neendawo ezivulekileyo nezivaliweyo, ezinje ngezemidlalo kunye neepaki zemoto. Isikhanyisi se-ergonomic construc ...
Iinxalenye zokukhanyisa ubuhlakani beempawu zokuvelisa ukukhanya kwe-P & Q
Ukuvelisa ngokukhawuleza kwe-P & Q Lighting kuvumele umenzi wokukhanyisa, i-LUG Light Factory Sp. z oo, ukubonisa imveliso yayo entsha yokukhanyisa kwi-2018 Light + Building Exhibition eFrankfurt. Ngemisebenzi ebekwe kwi-Z ...